Global Voices teny Malagasy » Olona 3 tapitrisa tonga nandatsa-bato, resin’i Hong Kong ny isa ambony indrindra tamin’ny fandraisana anjara hatrizay · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Desambra 2019 3:56 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika miora
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Shina, Fanoherana, Fifidianana, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana
3 tapitrisa teo ny olona nivoaka handeha hifidy nandritra ireo fifidianana izay ho filankevitry ny distrika  tamin'ny Alahady 24 Novambra 2019. Ny salam-pandraisana anjara tamin'ny 9:30 alina, ora ao an-toerana, dia efa nihoatra ny 69 isanjato , miaraka amin'ny isam-batompifidianana 2.853.608. Araka ny vinavina hatramin'ny 10:30 alina, fotoana nikatonan'ny birao fifidianana, mbola hiampy hiakatra 2 na 3 isanjato io salanisa io. Ny vokatry ny fifidianana dia mampiseho ny taham-pandraisana anjara tamin'ireo fifidianana rehetra nanerana an'i Hong Kong manontolo. Raha atao ny fampitahàna, ny taham-pandraisana anjara tao amin'io distrika io ihany tamin'ny 2015 dia 47 isanjato.
Mino ny ankolafy mpomba ny demaokrasia fa arakaraka ny maha-avo ny tahan'ny fandraisana anjara, no hahatsara kokoa ny vintana mety hahazoan-dry zareo ny maro an'isa amin'ireo seza 452 ao amin'ny filankevitra ao an-toerana. Nametraka  ny taham-pandraisana anjara 70 isanjato ho toy ny haavon'ny vina mety hahazoan'ny ankolafy mpandàla ny demaokrasia ny ankamaroan'ny seza ny olona iray mpandalina ny fifidianana, nampiasa ny angondrakitra lehibe.
Ny tarehimarika momba ny fandraisana anjara dia raisina ho tondro goavana maneho ny hevitr'ireo olompirenena manoloana ny krizy pôlitika misy amin'izao fotoana natosik'ireo hetsika fanoherana ny fampodiana ireo olona nahavita heloka bevava , hetsika izay naka endrika faobe tamin'ny Jolay 2019. Vonona ankehitriny ry zareo ao Hong Kong hilaza izay safidiny amin'ireo mpomba ny andrimpanjakana sy an'i Beijing etsy andaniny, ary ireo mpifaninana mpandàla ny demaokrasia etsy ankilany.
Raha mahavita mibata ny ampahany betsaka amin'ny taotalimben'ireo seza 452 ho an'ny filankevitra ao an-toerana ny ankolafy mpandàla ny demaokrasia, dia mety hahazo seza 117 amboniny ao amin'ny kaomity misahana ny fifidianana lehibe mpanatanteraka  ry zareo ka hahazo vato kely amboniny indray ho an'ireo fanovàna ara-politika amin'ny hoavy. Voalohany izao tao anatin'ny tantara no nanetsehan'ny ankolafy mpandàla ny demaokrasia mpifaninana 480 mihazakazaka ho an'ireo seza 452 rehetra.
Io voka-pifidianana io no vokatra ‘tsy ampoizina’ indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy lasa.  Voalohany, nahazo tsiny ho manohana an-jambany ilay volavolandalàna fampodiana olona nahavita heloka bevava io andrimpanjakana io. Faharoa, maro an'isa ireo teratany ao Hong Kong mihasorena hatrany amin'ny fanimbàna sy ny korontana mifandray amin'ireo hetsika fanoherana ny governemanta. Ankoatra izay, anatin'ny ankolafy mpandàla ny demaokrasia, nihalalina ny fisarahana misy eo amin'ireo mpanohitra radikaly sy ireo milamina, satria tsy resy lahatra amin'ny demaokrasia misy solombavambahoaka ny vondrona teo aloha.
Ankatoky ny andro fifidianana, niantso ny hanatsaharana ny hetsipanoherana  ireo mpandàla ny demaokrasia mpampiasa aterineto tao amin'ny media sosialy, isan'izany ny mifandanja amin'ny Reddit sy ny LIGHK ao an-toerana. Vokany, nizotra am-pilaminana ny fifidianana tamin'ny Alahady.
Tamin'ity 2019 ity, ahitàna mpikambana voafidy miisa 452 sy mpikambana avy hatrany (ex-officio)  miisa 27 ireo mpandrafitra ny filankevitry ny distrika, izay miasa ho mpitondratenin'ireo kaomity any ambanivohitra. Mampiasa ny “seza iray, rafitra vato tokana” io filankevitra io ary ny Vaomiera misahana ny Fifidianana  (EAC) miankina amin'ny fanjakana no tompon'andraikitra amin'ny famaritana ny faritanin'ireo seza 452 tsirairay avy.
Koa satria mety ho kely ny distrika, eo amin'ny mpifidy 10.000 eo, mety misy fiantraikany any amin'ny voka-pifidianana ny fahasamihafàna kely eo amin'ny fametrahana ireo velaran-tany mamaritra ny distrika. Raha ny marina, nanameloka ny EAC ho nanamboamboatra  ireo faritra mametra ny distrika tanatin'ny fifidianana tamin'ity taona ity ireo mpandàla ny demaokrasia.
Vokany, mahazo ampahany betsaka amin'ny seza foana ny mpomba ny andrimpanjakana anatin'ny fifidianana isaky ny distrika. Tamin'ny 2015, tanatin'ireo seza 431 ho an'ny filankevitry ny distrika tamin'izany, nahazo 299 (teo amin'ny 70 % teo) ny mpomba ny andrimpanjakana, raha seza 125 fotsiny kosa no mba azon'ny mpandàla ny demaokrasia. Na tamin'ny 2003 aza, taorian'ireo hetsipanoherana an-tapitrisany nentina nanoherana ny lalàna momba ny fiarovam-pirenena, seza 151 tamin'ireo 400 fotsiny ihany no azon'ny  demaokraty, satria enti-manana entina manohana olona 226 ihany no mba nananan-dry zareo.
Koa satria nanjaka tokana tao amin'ireo filankevitry ny distrika ny ankolafy mpomba ny andrimpanjakana tanatin'ny roapolo taona, namolavola tambajotra ifotony tsara orina izy, indrindra anivon'ny vahoaka mpisotro ronono amin'ny alalan'ireo tolotra ho an'ny vondrompiarahamonina sy ireo fanomezana maimaimpoana. Tamin'ny 2018, tanatin'ireo mpifidy voasoratra anarana miisa 3,81 tapitrisa , teo amin'ny ampahatelony teo — olona 1,23 tapitrisa — no maherin'ny 60 taona, raha latsaky ny 630.000 monja ny isan'ireo mpifidy 18 ka hatramin'ny 30 taona.
Farany kanefa tsy ny kely indrindra, lasa mavitrika kokoa ny vahoaka tanora amin'ny fandraisana anjara anatin'ny pôlitika. Anivon'ireo mpifidy vaovao 380.000 voasoratra anarana tamin'ny 2019 , teo amin'ny 48 % teo no 18 ka hatramin'ny 35 taona.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/12/01/145143/
 fifidianana izay ho filankevitry ny distrika: https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Hong_Kong_local_elections
 9:30 alina, ora ao an-toerana, dia efa nihoatra ny 69 isanjato: https://www.elections.gov.hk/dc2019/chi/turnout_numsum.html
 hetsika fanoherana ny fampodiana ireo olona nahavita heloka bevava: https://globalvoices.org/specialcoverage/the-people-of-hong-kong-vs-the-china-extradition-bill/
 kaomity misahana ny fifidianana lehibe mpanatanteraka: https://en.wikipedia.org/wiki/Election_Committee
 vokatra ‘tsy ampoizina’ indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy lasa.: https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3039001/hong-kong-district-council-elections-both-sides-wary-ahead
 hanatsaharana ny hetsipanoherana: https://www.thestandnews.com/politics/%E7%B6%B2%E6%B0%91%E7%99%BC%E8%A1%A8-%E9%80%A3%E7%99%BB%E5%85%B1%E5%90%8C%E5%AE%A3%E8%A8%80-11-24-%E7%B5%95%E4%B8%8D%E7%A0%B4%E5%A3%9E-%E9%BD%8A%E9%BD%8A%E6%8A%95%E7%A5%A8/
 filankevitry ny distrika miisa 18 : https://en.wikipedia.org/wiki/District_councils_of_Hong_Kong
 Vaomiera misahana ny Fifidianana: https://en.wikipedia.org/wiki/Electoral_Affairs_Commission
 nanameloka : https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/2156522/election-chiefs-bring-21-new-hong-kong-district-council
 nahazo 299 (teo amin'ny 70 % teo) ny mpomba ny andrimpanjakana, : https://www.thestandnews.com/politics/2015%E5%8D%80%E9%81%B8-%E8%B3%87%E8%A8%8A%E5%9C%96%E5%90%88%E9%9B%86/
 seza 151 tamin'ireo 400 fotsiny ihany no azon'ny: https://www.hk01.com/%E6%94%BF%E6%83%85/368627/%E5%8D%80%E8%AD%B0%E6%9C%83%E9%81%B8%E8%88%89-%E5%8F%8D%E4%BF%AE%E4%BE%8B%E7%A5%A8vs%E5%BB%BA%E5%88%B6%E9%90%B5%E7%A5%A8-%E6%96%BD%E5%BE%B7%E4%BE%86-%E6%B3%9B%E6%B0%91%E9%87%8D%E5%A5%AA%E5%8D%80%E6%9C%83%E6%9C%AA%E6%A8%82%E8%A7%80
 Tamin'ny 2018, tanatin'ireo mpifidy voasoratra anarana miisa 3,81 tapitrisa: https://www.hk01.com/%E7%A4%BE%E6%9C%83%E6%96%B0%E8%81%9E/341628/%E9%81%B8%E6%B0%91%E7%99%BB%E8%A8%98-%E8%9B%87%E9%BD%8B%E9%A4%85%E7%B3%AD%E7%95%B6%E9%81%93-%E5%9B%A0%E9%81%B8%E6%B0%91%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E8%80%81%E5%8C%96-%E5%B9%B4%E8%BC%95%E9%81%B8%E6%B0%91%E7%99%BB%E8%A8%98%E7%8E%87%E4%BD%8E
 Project Storm : https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/2091875/hong-kong-occupy-co-founder-benny-tai-unveils-project-storm
 mpifidy vaovao 380.000 voasoratra anarana tamin'ny 2019: https://news.mingpao.com/pns/%E8%A6%81%E8%81%9E/article/20190712/s00001/1562867618006/%E6%96%B0%E7%99%BB%E8%A8%98%E9%81%B8%E6%B0%91%E5%89%B5%E5%9B%9E%E6%AD%B8%E6%96%B0%E9%AB%98-%E5%AD%B8%E8%80%85-%E5%BB%BA%E5%88%B6%E4%B8%80%E5%A4%A7%E8%AD%A6%E8%99%9F